Gịnị kpatara ọnụ ahịa ụgbọ ala ji dị oke elu? -Ngwa akụkọ-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Gịnị kpatara ọnụ ahịa mmezi ụgbọ ala ji dị oke elu?
Dị ka "obi" nke ụgbọ ala ahụ, a ghaghị iji nlezianya dozie engine ahụ. Ihe ndị a bụ nchịkọta nke nnukwu nghọtahie ndị na-adị mfe idozi injin ụgbọ ala, ma nwee olile anya inyere gị aka n'ụgbọ ala gị kwa ụbọchị.
Ncheta: Ọ bụghị naanị mmezi nke injin ahụ n'oge oge mmezi oge ọ bụla, kamakwa nyocha na ndozi nke akụkụ dị mkpa nke injin ahụ mgbe ị na-ebugharị na mpaghara ụfọdụ iru mmiri ma ọ bụ uzuzu uzuzu.
Jiri ìsì wepu thermostat njin ahụ
Ọ bụrụ na ewepụ thermostat na nzuzo n'ihi igwe dị elu, igwe jụrụ ahụ nwere ike ịme nnukwu okirikiri, enweghị ike ịhazi ike jụrụ ahụ. O siri ike ịhụ na injin ahụ na-arụ ọrụ na ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Kama, injin ahụ na - arụ ọrụ obere oge, na - ebute ike njin. , The eyi na-accelerated na mmanụ ụgbọala oriri na-abawanye.
Na-agba ọsọ ọsọ kpo oku maka engine
Mgbe ị na-eji ọsọ na-agba ọsọ iji kpoo ọkụ, n'ihi obere ọsọ, mgbapụta mmanụ enweghị ike ịpị mmanụ na-ete mmanụ n'ime ngwa ngwa ngwa ngwa, na mmanu mmanụ dịkwa ala, nke mere na akụkụ ndị na-agagharị na injin ahụ na-arụ ọrụ n'okpuru esemokwu ma ọ bụ ọkara -dry esemokwu; obere okpomọkụ nke mmanụ ọkụ Ogbenye na-adịghị mma na-eme ka mmanụ ọkụ na-adịghị ọkụ gbaa ọsọ n'ime crankcase, sachaa ihe nkiri mmanụ na mgbidi cylinder, ma mekwaa ngwa ngwa nke akụkụ. Ya mere, sekọnd ole na ole mgbe engine ahụ malitere, a na-etinye ọsọ ọsọ na-abaghị uru iji melite ọnọdụ mmanu nke injin ahụ.
Igwe injin na-atụ egwu nke dị elu, ọ naghị atụ egwu nke dị ala
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-eche na njin igwe anaghị atụ ụjọ nke elu ma ọ bụ dị ala mgbe ọ na-akwọ ụgbọala. N'ezie, ọ na-emerụkwa ahụ nke ukwuu mgbe injin engine dị obere. Ekwesịrị iji ndụ ụgbọ ala hụ ọrụ site na ịnya ụgbọ elu dịka ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ịdị akọwapụtara na ntuziaka ọrụ ụgbọ ala.
Ime mmanụ ala na ịfụ ụfụ
Iji ihe ọkụkụ na-eme mmanụ ala n'oge oyi agaghị eme ka ihe mgbakwunye na mmanụ gbanwere ihe ọ andụ loseụ ma kwụsị ọrụ mbụ ya, kamakwa mee ka mmanụ ahụ nwee ciment ma mebie ala mmanụ, nke nwere ike ibute ọkụ. Omume kachasị mma bụ ịhọrọ mmanụ ụgbọ ala kwesịrị ekwesị dịka ọnọdụ kachasị dị na mpaghara n'oge oyi. Ebe ọnọdụ kwere, ọ kacha mma ị dọba ụgbọala ahụ na ebe a na-etinye ihe mkpuchi ihe.
The tighter mmiri mgbapụta ofufe eriri, mma
Belt ahụ na-esi sie ike adịghị mma. Tightgbachi eriri ahụ ga-eme ka ọ gbatịa ma ọ bụ mebie, mee ka ndụ eriri ahụ dị mkpụmkpụ, kamakwa ọ na-eme ka igwe na-ebu ọkụ na mmiri mgbapụta na-agbanwe ma gbagọọ ma mebie mbido mbụ n'ihi oke esemokwu. Ighari nke eriri fan nke igwe akuku kwesiri iru ihe oru teknụzụ. N'ozuzu, ntụgharị nke mgbakọ belt nkịtị bụ 10-15mm.
Automobile mmanụ arịa ọrịa na ogbenye mmanụ nyo
Ogo mmanụ dị iche iche akara mmanụ mmanụ ga-agbanwe n'oge eji. Mgbe otu kilomita gachara, arụmọrụ nke ụgbọ ahụ ga-aka njọ, nke nwere ike ibute nsogbu dị iche iche na injin ahụ. Iji zere omume nke ọdịda ndị a, a ga-agbanwe ụgbọ ala ahụ mgbe niile dịka ọnọdụ eji eme ihe, mmanụ mmanụ kwesịrị ịdị oke, n'ozuzu n'etiti oke elu na ala nke oke mmanụ.
Ncheta: Etinyekwala mmanụ mmanụ pere mpe, mana etinyela nnukwu ihe. Ọ bụghị na ka ọnụahịa aha njirimara sịntetik dị oke ọnụ, nke ka mma. Mmanụ injin dị mma maka ụgbọ ala gị kachasị mma.
Ikuku nyo nkwụnye
Igwe ikuku ikuku nke ugbo ala bu ihe mejuputara ihe nzacha ikuku na ikuku ikuku. Dị ka ọnọdụ ojiji dị iche iche si dị, a ga-ehichapụ ihe nzacha ikuku mgbe niile. Usoro ndị enwere ike iji mee ihe bụ ikuku dị elu na-esi n'ime pụta ịfụchasị ájá dị na ntinye ihe nzacha. Ikuku nyo mmewere kwesịrị n'ozuzu-anọchi mgbe nhicha ugboro 3. Enwere ike ikpebi nhicha nhicha site na ikuku dị na mpaghara ọkwọ ụgbọala kwa ụbọchị.
Ncheta: Ọ dịkwa ezigbo mkpa ịzụta ezigbo ihe nzacha ikuku nke ezi ndị nrụpụta nyere.
Unyi oriri ọkpọkọ
Ọ bụrụ na ụgbọala ahụ na-ejikarị ájá na ikuku ikuku na-adịghị aga n'ihu n'okporo ụzọ, ị kwesịrị ị paya ntị na nhicha nsị ikuku iji hụ na ịmịpụ nke ikuku. Ngwunye oriri dị ezigbo mkpa maka arụmọrụ nkịtị nke injin ahụ. Ọ bụrụ na ọkpọkọ oriri ahụ ruru unyi, ọ ga-eme ka mbelata arụmọrụ, nke ga-eme ka injin ahụ ghara ịrụ ọrụ n'ime oke ike mmepụta ọfụma, ma mekwaa njị na ịka nká nke injin ahụ.
Ncheta: Gbalịa izere ebe ndị ahụ na-acha uzuzu uzuzu, ma n'otu oge ahụ, payaa ntị na nnọchi nke ikuku ikuku.
Oke sludge na crankcase
N'oge ọrụ nke ụgbọ ala, nnukwu ikuku a na-agbanyeghị ọkụ, acid, mmiri, sọlfọ na nitrogen oxides n'ime ụlọ ọkụ na-abanye na crankcase site na ọdịiche dị n'etiti mgbanaka piston na mgbidi cylinder, na ntụ ntụ nke akwa ahụ mepụtara nke akụkụ Gwakọta ọnụ iji mepụta sludge. O siri ike mmanu mmanu njin ahu, nke na eme ka engine nke ya di ike. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe a na-etinye mmanụ mmanụ na okpomọkụ dị elu, ihe nkiri agba na carbon na-akwụ ụgwọ ga-etolite ma na-agbaso piston ahụ, nke ga-eme ka mmanụ ọkụ nke engine dịkwuo elu ma belata ike.
Ncheta: Iji belata mmepụta nke sludge, ọ dị ezigbo mkpa iji mmanụ dị elu. Ya mere, a na-atụ aro ka ndị nwe ụgbọ ala gaa ọdụ gas mgbe niile dị ka o kwere mee mgbe ha na-agba mmanụ. Tụkwasị na nke ahụ, iji mmanu dị mma na dochie ihe ndị na-ete mmanụ na ihe nzacha dị ka oge mmezi nke ndị nrụpụta kwuru akọwapụtara dịkwa oke egwu.
Previous: Anyi na anwu ndi SunsoUL LIVE na Aug 15th